Bitsibitsiky ny Afghana: Sivana & Fihaonamben’i Londra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2017 13:41 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Janoary 2006 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Mampahafantatra antsika i Afghan Lord fa miha maro ireo fantsona fahitalavitra tsy miankina ao Afganistana saingy mampitandrina momba ny loza ateraky ny sivana izy:
Ankoatra ireo fantsona tsy miankina toy ny Ariana tv, Tolo tv, Ayna tv, Afghan tv ary tafiditra ao ny fahitalavi-panjakana iray, natsangana ivelan'ny renivohitra ireto roa farany ireto. Araka ny filazan'ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao sy ny kolontsaina, mihoatra ny 25 ireo fahitalavitra tsy miankina voasoratra anarana hanomboka tsikelikely ny fandefasana fandaharana. Ny herinandro lasa teo, voampanga sy voasazy handoa 50000 Afghanis mitovy amin'ny 1000 dolara Amerikana ny Afghan TV noho ny fandefasana sarimihetsika tsy Islamika, izay nampiseho vehivavy miboridana tapany ambony tao amin'ny fahitalavitra. Nanomboka sivana ny fantsona iray manontolo ankehitriny.
Bilaogera hafa, Nikobad (“tsara sy ratsy” amin'ny teny persiana) nilaza fa izao no fotoana hilazana ny fandavàna ny sivana. Matoky ity bilaogera ity fa tsy miteraka fahalotoam-pitondran-tena ny fahalalahana fa manome fanajana ho an'ny olona mba handray ny fanapahan-keviny manokana. (Rohy amin'ny teny persiana) Nilaza izy fa miasa eo ambany ny fanarahamaso ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao mivantana ny komity tompon'andraikitra amin'ny sivana.
Dialogue 3 indray nilaza fa tsy ilain'ny vahoaka Afgàna ny fanapahan-kevitra amin'ny Fihaonamben'i Londra. Nolazainy fa manararaotra ny vola rehetra miditra ao amin'ny firenena ny ONG ary lasa niharatsy ny fiainan'ny olona tao anatin'ny roa taona lasa. (Rohy amin'ny teny Persiana)
Manana hevitra hafa momba ny fihaonambe i Nikobad. Nilaza izy fa hitambatra ny firenena 70 mba hanampy ny fampandrosoana an'i Afghanistan ao anatin'ny 10 taona manaraka. Mampiseho ity fihaonambe ity fa misy vokany ny fanapahan-kevitra stratejika mba hiara-miasa amin'ny firenena Amerikana sy Tandrefana. Nilaza izy fa ny fahaleovantena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia midika hoe fifampiraharahana amin'izao tontolo izao mba tsy hitokana monina.